KEDU IKIKERE WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Kedu ikikere Windows 10
sPlan bụ ngwá ọrụ dị mfe ma dị mfe nke ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ma bipụta mpaghara eletrọniki dị iche iche. Ọrụ na nchịkọta akụkọ adịghị achọ ka e mepụta ihe ndị dị na ya, nke na-eme ka usoro ịmepụta ihe omume dị mfe. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe omume a.
Na nchịkọta akụkọ nwere obere panel na ngwaọrụ ndị dị mkpa ga-adị mkpa n'oge a na-eme atụmatụ. Ị nwere ike ịmepụta ọdịiche dị iche iche, megharịa ihe, mgbanwe ntụgharị, ọrụ na isi na edo. Tụkwasị na nke ahụ, enwere onye na-achị achị na ike ịmepụta logo napacekspace ahụ.
Ebumnuche ọ bụla dị ma ọ dịkarịa ala abụọ akụkụ, ma ọtụtụ mgbe, ha dị ukwuu karị. sPlan na-enye ndokwa ndekọ ndekọ ụlọ ahụ, nke nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ dị iche iche. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ otu n'ime edemede iji mepee ndepụta mpaghara.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ndepụta na ihe niile nke ụdị a họọrọ ga-apụta na aka ekpe nke isi windo ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na òtù ndị egwú ahụ, e nwere ọtụtụ ụdị microphones, ọkà okwu na ekweisi. N'elu nkọwa zuru ezu, a gosipụtara aha ya, ya mere, ọ ga-adị ka ihe osise ahụ.
A na-edezi nke ọ bụla tupu agbakwunye ọrụ ahụ. A kwadoro aha ahụ, a debere ụdị ahụ, a na-ejikwa ọrụ ndị ọzọ.
Kwesịrị ịbanye "Editor"ịga na nchịkọta akụkọ iji gbanwee ọdịdị nke mmewere. Ndị a bụ ngwá ọrụ na atụmatụ dị iche iche, dịka na windo na-arụ ọrụ. Agbanwe akwukwo nke ihe eji eme ya na nke mbu na klas a nwere ike tinye ya.
Karịsịa, enwere obere menu ebe e debere aha maka aha a kapịrị ọnụ, nke dị mkpa mgbe nile na sekit kọmputa. Kọwaa njirimara ahụ, uru nke ihe ahụ ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye nhọrọ ndị ọzọ.
Lezienụ anya na ike ịgbanwe usoro nhazi - a na-eme ya na ndepụta kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji hazie ihu na peeji nke na-agbakwunye ihe na ya, na ịmaliteghachi dị tupu ịdee akwụkwọ.
Ndị mmepe na-atụ aro ka ị gbanwee ahịhịa na aka. Enweghi otutu mpaghara, ma ihe kachasị bụ mgbanwe nke agba, nhọrọ nke ụdị usoro, mgbakwunye nke ngwongwo. Cheta ịchekwa mgbanwe maka ha iji mezuo.
Mgbe ịmepụtara osisi ahụ, ihe niile fọdụrụ bụ iziga ya iji bipụta. sPlan na-enye gị ohere ime nke a site n'enyemaka nke ọrụ enyere ya na mmemme ahụ n'onwe ya; ọ dịghịdị mkpa iji zọpụta akwụkwọ ahụ n'ọdịnihu. Nanị họrọ ụdị chọrọ, nhazi ihuenyo ma malite ibipụta site na ijikọta ngwa ngwa.
Ọnụnọ nke nchịkọta akụkọ ahụ;
A nnukwu ọbá akwụkwọ nke ihe.
sPlan na-enye obere ngwaọrụ na ọrụ ndị na-ezughị ezu maka ndị ọkachamara, mana maka ndị hụrụ ohere ndị dị n'ebe ahụ ga-ezu. Usoro ihe omume ahụ dị mma maka ịmepụta ma tinyekwuo sekit kọmputa.
Download mbipụta nke sPlan
Mmemme maka ịbịaru sekit eletriki Ekegharị ihe dị mfe Roofing Pro Astra Open
sPlan bụ ngwá ọrụ dị mfe nke na-enye ihe niile ịkwesịrị ịmepụta ma bidogharịa kaadị eletrọniki. Na saịtị ndị ọrụ ahụ, e nwere nsụgharị ngosi, na-akparaghị ókè na arụmọrụ.
Onye Mmepụta: ABACOM-Ingenieurgesellschaft